भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins एक दोहरी मोड स्लट खेल साथै मानक भाग्य spins द्वारा संचालित छ. यो तपाईं विजेता को एक लाभ पछि धेरै स्लट देखि दिन्छ. यो निःशुल्क अनलाइन spins बोनस खेल मानक र भाग्य मोड दुवै पाँच रील छ. त्यहाँ प्रतीक दुवै तरिका को एक संयोजन भुक्तानी दस paylines छन्. पृष्ठभूमिमा एउटा उज्ज्वल र रंगीन इन्द्रेणी एक हरिया उपत्यका हो. यो विषय लोकगीत प्रसिद्धि को बाट भाग्यशाली Leprechaun आधारित छ. यो सट्टेबाजी सीमा £ 500 हरेक स्पिन गर्न £ 0.10 बीच सेट र सुरु सीमा भाग्य स्तर मा £ 2.
किस्मत हे 'को आइरिस भाग्य Spins विकासकर्ता बारेमा
यो अद्भुत बहु-स्लट खेल निलो छापा गेमिङ कम्पनी द्वारा विकसित भएको थियो. अनलाइन क्यासिनो खेल विभिन्न किसिम बनाउदा अनुभव वर्ष संग, तिनीहरूले विश्वव्यापी उद्योग सबैभन्दा सफल विकासकर्ताहरूले रूपमा फस्टाए छ.
यो रंगीन निःशुल्क अनलाइन spins बोनस खेल बहुमूल्य रातो साथ सुन सिक्का को पट केही अद्भुत प्रतीक छ, नीलो र हरियो रत्न. सुनको पट को प्रतीक शीर्ष तिर्ने छ 500 पटक आफ्नो तरिका को पाँच तपाईंको खम्बा. 10, जे, Q, एक र खेल कार्ड को K तल्लो तिर्ने हुन्छन्. यी प्रतीक मानक spins साथै भाग्य spins देखा दुवै. त्यहाँ खेल लोगो छ जो सिर्फ एक बोनस प्रतीक हो र यो मात्र भाग्य spins समयमा देखिन्छ. सबै प्रतीक दायाँ-बायाँ र बायाँ-सही दुवै तरिका तिर्न. बीचमा तीन रील मा एक पंक्ति मा एक प्रकारको तीन पनि संयोजन विजेता बनाउन.
भाग्य Spins: यो यस को दोस्रो मोड छ निःशुल्क अनलाइन spins बोनस खेल चार अलग स्लट संग प्ले. यो स्लट पछि स्पिन, अन्य कुनै पनि बोनस प्रतीक उपस्थिति पछि एक स्पिन अझै बाँकी छ जहाँ स्लट मा प्रतिकृति हुन्छ. सबै बोनस प्रतीक रहस्य प्रतीक मा प्रकट र तपाईं विजेता केही ठूलो हात दिन सक्छ.
सट्टेबाजी रणनीति: यो तपाईंको बाजी राखेर गर्दा निःशुल्क अनलाइन spins बोनस खेल, तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ केही रणनीति हो. तपाईं भाग्य स्तर मा चार स्लट देखि जित्न सक्छौं देखि, तपाईं जीत राशि मानक spins भन्दा उच्च हुनेछ. त्यो तपाईं आधार खेलमा ठूलो जीत सक्दैन होइन. तपाईं मानक बीच टगल गर्न सक्छन् र भाग्य कुनै पनि समयमा spins.
यो छ निःशुल्क अनलाइन spins बोनस खेल संग दोहरी मोड मदत गर्न तपाईं बढी जीत. उच्च गुणस्तरीय ग्राफिक्स र प्रभावशाली सुविधाहरू, तपाईं सजिलै यहाँ केही लाभ बनाउन आशा गर्न सक्छौं.
आइरिस आँखाहरु 2